यसरी राख्नुहोस प्रेम प्रस्ताव ?
Friday, 14 Feb, 2020 8:01 AM
प्रेम स्वत हुने कुरा भनिएपनि कुनै न कुनै रुपमा प्रेम व्यक्त हुनुपर्छ । प्रेम पोखिनुपर्छ । प्रेम पग्लिनुपर्छ । प्रेमको सुरुवात प्रस्तावबाट सुरु हुन्छ । कसैलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नुअघि उनको मनोभावना बुझ्नुपर्छ ।
यदि आफुले मन पराएको व्यक्ति आफुप्रति सकारात्मक छ भने प्रस्ताव राख्न सकिन्छ । प्रेम प्रस्ताव राख्न हतारिनुपनि हुँदैन । मुलतः उ आफू प्रति सकारात्मक छ छैन बुझ्नै पर्दछ ।
प्रेम प्रस्ताव भनेको प्रेम व्यक्त गर्ने हो । यसका विभिन्न माध्याम हुन्छन् । फूल दिएर हुनसक्छ, उपहार दिएर हुनसक्छ । वा कुनै रमाइलो शैली अपनाएर हुनसक्छ ।
प्रेम प्रस्ताव राख्नका लागि उचित स्थानको खोजी गरौं । यस्तो स्थान, जहाँ निर्धक्क प्रस्ताव राख्न सकियोस् । प्रेम व्यक्त गर्न सकियोस् ।
आफुले मन पराएको व्यक्तिलाई कुनै रेष्टुरेन्ट वा कतै डिनरको लागि निम्तो गर्न सकिन्छ ।
प्रेम व्यक्त गर्ने माध्याम हो, उपहार । यस्तो उपहार छनौट गरौं, जसमा आफ्नो प्रेम व्यक्त होस् ।
जहाँ मौका पायो त्यहि प्रस्ताव राखिहाल्ने हतारो नगर्नुहोस्। खासगरी युवतीलाई महंगा उपहारले भन्दा पनि उनीहरुलाई विशेष महशुस गराउँदा धेरै खुसी हुन्छन्। त्यसैले उनीहरुका लागि केहि त्यस्तो योजना बनाउनुस्, जसले उनको मन तपाई भएतिर तानियोस्।
आफूले लगाउने कपडा र सुहाउँदो जुत्तामा ध्यान दिनुहोस्। कपडा, जुत्ता तथा सुहाउदो हेयर स्टाइलमा राम्रो परफ्युमको पनि प्रयोग गर्न नभुल्नुहोस्।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले नेकपा प्रवक्तालाई भने - इनफ इज इनफ नारायणकाजी जी !
पोखरामा थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी
चिकित्सकको चरम लापरवाहीका कारण सुत्केरीको मृत्यु